Umaka: dlula | Martech Zone
Ngisanda kuqala ukusebenzisa iPasbook ku-iPhone yami lapho ngivakashele i-Starbucks. Yize ngiziqhenya ngeStarbucks Gold Card yami, ngijabule kakhulu ukunciphisa ubukhulu besikhwama sami semali ngekhadi elilodwa. Ngivele nginikeze i-barista ifoni yami futhi bayakwazi ukuskena ikhadi lami lemiklomelo khona lapho! Ngisebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Starbuck, ngingalayisha kabusha ikhadi lami ngqo kusuka efonini yami. I-Next Web isanda kuthumela konke